मेरो बच्चा हुन्छ भन्ने सोचेर नै हतारमा विवाह गरेकी थिए तर : मनिषा - समृद्ध नेपाल
मेरो बच्चा हुन्छ भन्ने सोचेर नै हतारमा विवाह गरेकी थिए तर : मनिषा
म पनि अरु महिला जस्तै हो । मेरो पनि आमा बन्ने चाहना थियो । मलाई लाग्थ्यो म पनि कुनै दिन आमा बन्नेछु । तर मलाई अब कहिल्यै आमा बन्न नसक्ने बनायो । त्यो सम्झदा निकै दुख लाग्छ यो भनाई हो अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको । उनको जिवन निकै लाभलाग्दो थियो । सबै उनको जस्तो जिवन चाहन्थे । तर मनिषालाई नै विश्वास नै नलाग्ने रोग लाग्यो ।
मलाई लागेको थियो मेरो बच्चा हुन्छ भनेर तर पाठेघरकै क्या न्स र हुन्छ भन्ने लागेको थिएन । मलाई बच्चा जन्माउने ठूलो रहर थियो त्यसैले विवाह पनि गरेकी थिए उनले यती भन्दा निकै भावुक भइन् । उमेर बढ्दै गएका कारण आमा बन्नकै लागि आफुले हतारमा विवाहको निर्णय गरेको मनिषाको भनाई छ । २०१० देखि नै कुरा आइरहेको भएपनि उनले हतारमा विवाह गरेको बताइन् । त्यो उनको जिवनको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको पनि अहिले लागेको छ ।
यी १० लक्षण भएका व्यक्तिहरु हुन्छन् सँधै असफल, पुरा जान्नुहोस
रघुवीर महासेठलाई धनुषामा देखाइयो कालो झण्डा !
आज भाइ टिका ११:५५ मा शुभ साइत,यस्तो छ तिहारको महत्त्व !
ट्राफिक प्रमुख नै बस र ट्याक्सीमा चढेपछि जिल्ल खाए चेक गर्न बस्नेका ट्राफिक पनि
छोरा र श्रेमती एकातिर झुन्डिएको खबर सुन्ना साथ बुवा भिरबाट हाम्फाले भिडियो सहित !
कोही कान्छी त कोही चौथो श्रीमती भएर भित्रिएका ७ नेपाली सुन्दरी !
डिशहोमले प्रभु टिभीलाई एक्वाएर गर्ने एक्विजेशनपछि मात्रै आइपीओ !
गरिबको जिन्दगी यस्तै रहेछ !
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालबाट विजया दशमीको टीका प्रदान।
न श्रद्धाञ्जली, न दागबत्ती : हेर्न नचाहेको बागमती किनारको दृश्य !
प्रदेशकै ठूलो अस्पतालको मुर्दाघरमा यस्तो धन्दा !